Tababare Allegri Oo Ka Walwalsan Qaab Ciyaareedka AC Milan Ka Dib Guuldarradii San Siro. - jornalizem
Tababare Allegri Oo Ka Walwalsan Qaab Ciyaareedka AC Milan Ka Dib Guuldarradii San Siro.
Tababaraha AC Milan Massimilliano Allegri ayaa shaaca ka qaaday inuu ka walwalsan yahay sida xun ee ku bilaabatay AC Milan xilli ciyaareedkan, isagoo sheegay in kooxdiisa ay u baahan tahay inay sabarto ka dib guuldarro 1-0 oo ka soo gaartay Atlanta.
Inkastoo Milan ay ciyaarta heysatay qeybo badan oo ka mid ah, hadana waxaa mar kale seddexda dhibcood looga qaatay garoonka San Siro ka dib gool uu u dhaliyay kooxda martida aheyd Luca Cigarini.
“Waxaan heysanaya hal dhibic ka badan marxaladaan markii aan mareynay xilli ciyaareedkii hore” ayuu ku dooday 45 jirkaan shirkiisa jaraa’id.
“Kooxda wax weyn ayay isbedeshay.” ayuu hadalkiisa raaciyay.
“Waan qiranayaa inaan waxoogaa walwalsanahay, sababtoo ah wax fiican ma ahan inaan sidaan u ciyaarno. Waa inaan noqonaa kuwa niyadsan. Ciyaartoyda waa inay iska dhigaan rag waa weyn islamarkaana ay ogaadaan in qalqal lagu ciyaaro aysan noo keeneynin inaan horumar sameyno.
“Waa inaan dib ugu laabanaa wadada saxda ah, lakiin waa maskax ahaan ee ma ahan inta badan farsamo ahaan. Waxaan halkaan joogo qaar da’ yar waxaana ay u baahan yihiin inay ciyaartoy waa weyn iska dhigaan sida ugu dhaqsiyaha badan.”
Markii ugu danbeysay ee labo kulan oo isku xigta lagu garaaco garoonkeeda bilowga horyaalka waxa ay aheyd 80 sanno ka hor.
Kooxda Allegri ayaa haatan fursad u heli doonta inay guuldaradan is ilowsiiyaan marka ay Champions League habeenka talaadada la ciyaarayaan kooxda Anderlecht.